नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ अब ईण्डियनहरुसंग यु’द्ध नै मात्र एउटा विकल्प ! – Halkhabar kura
२३ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०९:१८
नेपालको सार्वभौमिकताको रक्षार्थ अब ईण्डियनहरुसंग यु’द्ध नै मात्र एउटा विकल्प !
सार्वभौमिकताको रक्षार्थ अर्को भ्रम नपाले हुन्छ, दलालहरूकाे संविधान, कानून र ऐनका कुरा छाडौं !
३ हजार बर्ष पुरानो अस्तित्व भएको देश हाे नेपाल। नेपालको चर्चा वेद, उपनिषद र पुराणहरु सबैमा पाईन्छ। ती सबै प्राचिन साहित्यहरुमा नेपालको सिमाना आसाम देखि कुमाउँसम्म किटान गरिएको छ। महतोको देश ईष्ट ईण्डिया कंपनीले बनाईदिएको हो। त्यो भन्दा अगाडी ईण्डियाको वर्तमान नक्शाको अस्तित्व कहिले पनि थिएन।
ओली र विद्या जस्ता तल्लोस्तरका कुन्ठाग्रस्त निम्छरा प्राणिहरुलाई उपयोग गरेर ईण्डियनहरुले नेपालका विरुद्धमा फेरी बकबास् गर्न थालेका छन्। जन्मको आधारमा नागरिकता बनाउने देश विरोधि अपराधिहरुले नेपाललाई विदेशी क्रिडास्थलका रुपमा परिण गरेका छन्।
ईण्डियनहरुको जनसंख्या अतिक्रमण अब देशको सबैभन्दा ठूलो् समस्या बनिसकेको छ। ईण्डियनहरुको यो घेराबन्दीबाट देशलाई मुक्त गर्ने हो भने नेपाल विरोधि कुतत्वहरुसंग वारपारका लागि युद्धको बाटो समात्न अनिवार्य भैसकेको छ। यसमा कसैको भ्रम रहनु हुँदैन।
फिलिस्तिनीहरुको इतिहासबाट सिकौं ! देशलाई विदेशीहरुको ईजरायल बनाउन नदिने हो भने नेपाल विरोधि घुसपैठिया विदेशीहरुलाई मार्नै पर्छ। यति मात्र होईन, यदी देशको सार्वभौम अस्त्विको स्थायीत्वलाई अक्षुण्ण राख्ने हो भने ईण्डियाको विखण्डनका हर संभावनाहरुलाई समर्थन गर्नु पर्दछ।
ढुंगा, बालुवा र गिट्टीसंग सत्ताको सौदाबाजी, के हो सौदाबाजीभित्रको ईण्डियन रणनीति ?
चुरे क्षेत्रबाट बालुवा, गिट्टी, ढुंगा निकाल्दा त्यसले कस्तो विनाश ल्याउँछ भन्ने कुरा बुझ्न केपी ओलीको दिमाग सक्षम छ तर सत्ताको उन्मादले मात्र उनको मष्तिष्क चक्कराएको हो। ईण्डियाले पहिल्यै देखि चुरे क्षेत्रलाई चीनबाट आफ्नो सुरक्षाको रेखाका रुपमा ब्याख्या गर्दै आएको छ। ओलीले जारी गरेको नागरिकता ऐन पनि यसै क्षेत्रसंग जोडिएको छ।
यी दुईवटा कुराहरु बाहेक ईण्डियनहरुको आँखा अर्को कुरामा पनि गढेको छ। त्यो हो, चुरे क्षेत्रमा पाईने खनिज र खानीको भण्डार हडप्ने योजना। नेपालले गरेको सर्भे अनुसार चुरे क्षेत्रसंग जोडिएका जिल्लाहरुमा ताँबा, जिंक, यूरेनियम, निकेल, चाँदी, टीन, चुनढुंगा, डोलोमाईट, मार्बल, म्याग्नेसाईट, कोबाल्ट, नूनको प्रचुर मात्रामा भण्डार रहेको छ।
यी सबै खानी र खनिजहरुको अवैध तस्करी गर्ने उद्देश्यमा ईण्डिया पहिल्यै देखि लागेको छ। निजगढबाट काठमाडौं सम्मको द्रुत मार्गको ठेक्कामा ईण्डियाले गर्दै आएको जिद्दिका पछाडीको मूल कारण यही थियो। अहिले ओलीले ईण्डियनहरुको कथित सुरक्षाको प्रश्न सम्बोधन गर्न र खानी तथा खनिजहरुको चोरीका लागि वातावरण बनाईदिन त्यस क्षेत्रबाट बालुवा, ढुंगा, गिट्टी निर्यात् गर्ने निर्णय गरेका हुन। यो सत्ता र लुटका लागि यौटा देशद्रोहीले गर्न सक्ने अपराधको सामान्य नमूना मात्र हो।
Previous स्वर्गबाट राजा विरेन्द्रको मार्मिक संदेश , राजा विरेन्द्रले यस्तो भन्दै होलान्
Next देशलाई बर्वाद पार्न’ कम्युनिष्ट-कांग्रेस या अमुक दल’को गोटी बनेर कहिलेसम्म योगदान गर्ने युबा हो !